सरकारले नागरिकको चूल्हो निभेको पत्तो नपाउनु भएन ? अधिकारी – newslinesnepal
सरकारले नागरिकको चूल्हो निभेको पत्तो नपाउनु भएन ? अधिकारी
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७६, शनिबार ०९:४३
देशव्यापी लकडाउनको आज पांचौ दिन । शहरमा रहने नागरिकहरुका तुलनामा गाउँमा तुलनात्मक प्रभाव कम पर्ने रहेछ । यद्यपी राजधानी काठमाण्डौ र देशका शहरी इलाकामा बस्ने जनताहरुका लागि भने दिन बित्दै जांदा झनझन दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको देखीएको छ । यद्यपी प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासमा आजका मितिसम्म नागरिकले साथ दिएकै छन । बरु प्रहरी प्रशासन अत्यावश्यक काममा निस्केका नागरिकहरुका लागि समेत थप कठोर बन्दै गएको हामीले देखेकै हो । राजधानीको ठुलो जनसंख्याले राजधानी छोडीसकेको छ, यद्यपी कार्यव्यस्तताले समयमै निर्णय गर्न नसकेका धेरै मानिसहरु काठमाण्डौमै थुनिएका छन । उनीहरु गाउँ फर्कन त चाहन्छन, तर सरकारको एकोहोरो रटान यस्तो छ की सडकमा निस्कने बित्तिकै भाटेकारबाही । उनीहरु के उदेश्यका लागि निस्कीएका हुनसंग सरकारको जवाफदेहीता कही कतै जोडिएको पाईदैन । यहीबिचमा अलपत्र परेकाहरुका लागि बिभिन्न व्यक्ति तथा संगठनहरुले बिभिन्न स्थानमा फरक शैलीबाट सेवा प्रवाह भईरहेको पाउंदा अलिकता सन्तोषको स्थीति अझै बांकी छ । केही समयअघिमात्रै गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष तथा स्थानिय समाजसेवी शिव अधिकारी अबिरलको पहलमा नुवाकोट घर भएका तर बिभिन्न कामले काठमाण्डौमा रहेका (अलपत्र परेकाहरुलाई) निशुल्क बस सेवामार्फत घर छोड्ने काम भयो । सेवा पाउनेहरुले अधिकारीलाई मुरीमुरी धन्यबाद पनि दिए । सरकारको अगाडी नागरिकका प्रयासको अंकगणित बलियो नहोला, तर प्रर्यन्तप्रतिको सम्मान जरुरी छ ।
आम नागरिकको तहमा यसले पारेका प्रभावलाई बिभिन्न ढंगले बिश्लेषण भईरहंदा लकडाउन पछिको स्थीतिका सन्दर्भमा सरकारको भुमिकाप्रति तपाईको बुझाई के छ भनी गन्तव्य नेपाल ग्रुपका अध्यक्ष शिव अधिकारी अबिरलसंग सोधेका थियौ ।के छ त वहाँ को बिचार ?
लकडाउन कोरोनको त्रासलाई निर्मूल पार्नको लागि आवश्यक पनि छ । यद्यपी यही बिचमा कालोबजारी मौलाएको छ । न्यूरोडभित्रका ८, १० वटा पसलमा अनुगमन गरेर मात्रै सरकार पन्छिन, मिल्दैन । ग्यांस नपाए फलानो नम्बरमा फोन गर्नु भन्ने सरकारले नागरिकको चूल्हो निभेको पत्तो नपाउनु भएन ।
जब प्रतिकुल अवस्था आउंछ,
राज्यसंंयन्त्रका एकथरी व्यक्तिको लागि पर्व आए बराबर हुन्छ । व्यापक भ्रष्ट्राचार बढेको छ । अर्कोर्फ कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन अवधी बढ्ने भन्ने हल्ला गरिदैछ । भाको पेटले नियम नमान्न सक्छ, यस्तोमा बिश्वका सबै देशहरुले बिपन्न नागरिकहरुका लागि खाद्यन्नको जोहो गरिरहंदा सरकार मुकदर्शक बन्ने स्थीति किन ?
मुख्यतः भर्खरै बिदेशबाट आएका, छिमेकी भारतबाट आएका परिवारका सदस्यहरुलाई धरपकड गर्ने, त्रास पैदा गर्ने स्थीति सबैतिर देखीएको छ । नेपाल प्रवेश गर्दा नै गर्नुपर्ने तयारी परिवारसंग मिलन भैसकेपछि गरिदैछ । यस्तोमा यस्तो हल्लाबाजी व्यक्तिबिशेष आक्रमण सिवाय अरु केही होईन । सत्य यही हो, अबको उपचार नवआगन्तुक सदस्यलाई घरमै सेल्फ क्वारेन्टाईनमा राख्नु जरुरी छ । किनकी परिस्थीति अप्ठेरो छ भन्दैमा कसैलाई अनावश्यक लाञ्छाना लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानिय जनप्रतिनिधीको भुमिका पनि देखीनपर्यो, भन्ने मेरो बुझाई हो ।
समाजको एउटा बर्ग कोरोना लाग्यो भने संसारै सकियो भनेजसरी समाजमा हौवाको स्थीतिको पैदा गर्न लागिरहेको छ । यसो हुन भएन । सरकारले लकडाउन गर्दै गर्दा आम समाचारमाध्यमले संक्रमितको संख्यामा मात्र होईन, उपचारपछि घर फर्किएका बिरामीमा पनि ध्यान दिनपर्यो । भन्न खोजिएको संक्रमणको हौवा मात्रै होईन, उपचार पनि संभव छ भनौं ।
अहिले धेरै नागरिकहरुमा मानसिक रुपमा नैराश्यता छाएको छ, यदी यो समय लामो समयसम्म रह्यो भने त्यो व्यक्ति र समाज दुबैका लागि घातक बन्छ भन्ने कुरा बुझौं ।
यसको मतलब कोरोनालाई वेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होईन, संयमित बनौं, भन्न खोजिएको हो । सबै नागरिक सभ्य शिक्षीत हुन्छन भन्ने छैन, यस्तोमा अतिआवश्यक काममा रहेका व्यक्तिहरु वा बिनाजानकारी बाटोमा निस्कीएका नागरिकहरुलाई प्रहरी प्रशासनबाटै धरपकड र कुटपिट गर्ने गरिएको छ । राज्यलाई यस्तो गर्न सुहाउंदैन । एकातिर कोरोनाबाट जोगिन भिडभाडमा नजाउ भन्ने सरकार अर्कोतर्फ बाटोमा भेटिएकालाई जथाभावी गाडीमा कोचेर बलप्रयोग गर्नु सुहाएन ।
राजनीतिक दलका पार्टीका भातृसंगठनहरुको भुमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनचेतना जगाउने नाममा अन्य नागरिकसरह हौवाबाजीमै केन्द्रित भईरहंदा बिपन्न नागरिक र अन्य समस्यामा परेकाहरुका लागि उनीहरुको सक्रियता देखिएन ।
मुलुक लकडाउन भनिएको छ, तर कारोबार ठप्प भैसक्दा पनि व्यावसायीहरुलाई यही बिचमा बैङ्कको ताकेता उस्तै छ, यसमा सरकारको ध्यान खै, कि पैसा संकलन गर्नेहरुलाई मुलुकको परिस्थीतिले छुंदैन ?
अझैपनि काठमाण्डौबाट बाहिर स्थायी बसोबास भएकाहरु बाहिरीन चाहन्छन, उनीहरुलाई बाहिरीने बातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । सुन्दा सामान्य लाग्ला, यही बेला गांउमा परिवारका सदस्य सिकस्त हुंदा आफू काठमाण्डौमा थुनिएर बस्नुपर्दाको पिडा फगत हौवा फैलाउनेहरु र निर्दयी प्रशासनलाई थाहा छैन । अतिआवश्यक मात्र होईन, मानबताको पनि रक्षा होस ।
मानबिय संबदेनालाई सर्बोपरी ठानेर सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । नेपाली संसारभरी जहां बसेपनि नेपाली नै हुन भन्ने बुझ्न जरुरी छ, हिजो रेमिट्यान्समा आनन्द उठाउने सरकारले आज अप्ठेरो पस्थिीतिमा घर फर्किएकाहरुमाथि प्रहार गर्नु भएन, संयमित हुनुपर्यो । कोरोना बिरुद्धको अभियानमा सरकार र नागरिक दुबैको सहयोग जरुरी छ । यसैमा सबैको ध्यान पुगोस